Omunye izinhlobo endala lokuzivivinya kuthiwa ukhipha kubha. Kuyini futhi lokho marekhodi kule umsebenzi? Sihlaziya lezi zinkinga ngokuhamba isihloko.
Lo msebenzi ubizwa ukuba ngokuphelele wonke umuntu ezaziwayo. Siye sabona izithembiso zakhe esikoleni. Othile iziqondiso belambatha ngoba iphakama, umuntu uye wasebenzisa zona sawo esiningi futhi abanye baye banikezela izifundo phezu ingxenye oluvundlile ebalulekile empilweni yakho.
Kodwa ngubani can
Classic silingo kubha bezilokhu ngempela umsebenzi onzima, futhi nalabo ababesazi kahle indlela abawenza, njalo savusa isasasa phakathi kwabanye. Kungakanani, ngokwesilinganiso ukudansela isiginci sakhe ovamile? Ukubala kuzothatha isikhathi esingakanani, amadoda yebo, kuphela, they epha lesi sivivinyo lula kakhulu kunabesifazane. Ngakho, uma ukhumbula ngokomzimba Ezifundweni esikoleni, amazinga evamile abafundi basesikoleni esiphakeme kwaba izikhathi ezingu-12. Abanye, ngokusebenzisa ukuqeqeshwa, ukufinyelela izikhathi 20-25. Ekugcineni, ephezulu ezingeni abasubathi, isikhathi esiningi Sizokwenza iphakama, ungahlinzekela izindlela 40-60 ezinikezwa. Ukukhuluma ngokwesilinganiso, njalo indoda ngisho kancane abathintekayo kwezemidlalo, uyakwazi ukubamba izikhathi 8-10.
Kodwa lokho irekhodi lomhlaba ukuze iphakama? Lo mbuzo oyithandayo abantu abaningi, hhayi nje abasubathi. Abantu nje uzibuze ukuthi ezingeni ingaqala ukusebenza kwabo lesi sivivinyo.
Eqinisweni, akekho iyiphi irekhodi eyodwa yawo iphakama kubha. Kulesi umsebenzi, kukhona inani elikhulu kokuphakanyiswa kwamagama, okwadala eziningi ezahlukene impumelelo okusezingeni eliphezulu. Ezimweni eziningi, irekhodi emhlabeni wonke iphakama isikhathi ezahlukene enikelwe ukuzivocavoca, iyiphi indlela enza. Ngokwesibonelo, ahlukile ngokwanele iyiphi ukuphindaphinda kungase kungafaneleki isigaba esisodwa. Ingxenye zesifazane lwesintu, futhi, uye wahlanganyela ukuzuzwa imiphumela ephezulu. Endaweni yokuqala lapho kuqinisekiswa ukuthi irekhodi okufanele ukuchaza isikhathi okuyiwona udinga ukubamba inombolo enkulu izikhathi.
Irekhodi emhlabeni ngoba ukhipha. Lesitshalo nesigaba
Iningi intuthuko kakade zaba cishe enkulungwaneni yesithathu. Ngokwesibonelo, i-American Dzheyson Pettsold wadonsa izikhathi ezingu-50 amasekhondi angu-60 ku-June 2009. Phakathi kwabesifazane, impumelelo eliphakeme fanele Elitsa Weber, compatriot Jason. yi wakhe kwaba 37 ezinikezwa. Futhi-ke evunyiwe irekhodi lomhlaba ukuze iphakama nesosha Vietnamese. He is imizuzu 3 ukwenza ezinikezwa 100.
Abanye ukuqopha i iphakama kubha Kuye kwenziwa isikhathi eside kakhulu kunalokho. Ngakho, umuntu othile uStefanu Hyland ngo-2007 kwenziwa ezinikezwa mayelana 2,900 amahora 6. Izwe iqhawe amaningi iphakama, American Dzheyson Armstrong, waqopha umlando ezimbalwa amahora 12 no-24. Phakathi nalesi sikhathi wadonsa 3165 futhi 3355 izikhathi, ngokulandelana. Highland futhi kubonise imiphumela ephezulu kakhulu kulezi zigaba. Abanye bathi ngisho waphula ukuzuzwa Armstrong bese usetha irekhodi elisha kokuqina emhlabeni.
Kungani umehluko onjalo elincane imiphumela? Ngoba, kungakhathaliseki ukuthi umsubathi lelungiselelwe, wayesalokhu ayikwazanga ngokulinganayo kahle futhi ngokushesha uhambisane isikhathi eside. Iningi amabutho aphume ekuseni, bese umphumela incike intando yomuntu. Phakathi okuphindaphindiwe ekusebenziseni lo msubathi uqala "clog" amaqembu imisipha. Lena ngokuyinhloko dorsi latissimus futhi izikhwepha zomfana. Ngenxa umsebenzi isikhathi eside futhi kanzima, bathola umthwalo omkhulu. Esinye isici ezithinta irekhodi, yisimo sokuthokoza ezandleni umsubathi. Bonke abantu abake wazama ukubamba up empilweni, ukwazi ukuthi amaningi kakhulu visy kubha kungaba buhlungu ngempela. Ngakho-ke, kukhona amacala lapho abasubathi eseqedile ukusebenza kwabo ngenxa yobuhlungu.
Kodwa yeka ukuthi irekhodi iphakama kubha isethwe ngesikhathi esisodwa? Ngoba abantu kuba cishe izikhathi 470-500, futhi akunakwenzeka ukuba yaphulwe esikhathini esizayo esiseduze. irekhodi Guinness ngoba kokuqina ephethwe isakhamuzi Russian Nikolai Kaklimovu, okuyinto ihora wakwazi ukwenza 844 ezinikezwa.
Yiziphi izimo okumelwe ahlangabezane nazo ekwenzeni amarekhodi emhlabeni wonke iphakama? Yiqiniso, kumelwe kushiwo mayelana izinga lokuqaliswa. Zonke yamarekhodi ngenhla ubuchwepheshe engenakuqhathaniswa. Manje baningi amarekhodi olungekho emthethweni lapho ukwephulwa ezibucayi (jerks kwezinyawo zakhe, wahosha, edonsa akuphelele) nawo angeniswe. Konke lokhu akuvumelekile ekubekeni amarekhodi. Donsa-ups kufanele sigcwaliswe kuphela ngezithukuthuku imisipha Kufinyeta, ngokushelela nangekutetsemba. Liphinde akuvumelekile noma yiziphi izinguquko kule amplitude ukunyakaza. Kufanele kwenzeke kusukela iphuzu aphansi (vis izandla phezu waqonda) kuya engenhla (kwesilevu oluvundlile). Abasubathi owabeka amarekhodi kwabanye isikhathi eside isikhathi abavumelekile iyiphi inombolo izindlela futhi ngokukhululekile aphumule phakathi. Umphumela ezingaguquki kuphela ngemva kwesikhathi umsubathi eyabelwe iphela, noma uthi ekunqanyulweni yomsebenzi wabo.
Indlela yokufeza imiphumela ephakeme?
Irekhodi emhlabeni wonke kokuqina - umphumela ngokuphelele ongenakuwufinyelela abantu abavamile. Kungani? Ngoba kuyomelwe ukwenza Kusaphazwa umzamo futhi isikhathi esiningi impumelelo enjalo. Abantu ababeka impumelelo eliphakeme, wachitha ingxenye enkulu yokuphila kwakhe. Akukhona iminyaka elilodwa noma amabili ukuqeqeshwa. Ngakho-ke, sizoqhubeka zibabaza emangalisa Champions indlela!
Kanjani ukusebenzisa webanga: ibanga, inqubo egijima, amathiphu wabaqalayo
Kanjani ukuze ome amagilebhisi ekhaya
Kolwelwesi, ekwelapheni amakhambi abantu kungasiza ukuqeda lesi sifo
Inyoni edla inyama
Pumps lezigubhu: ukuchelela, efaka umquba kanye neensetjenziswa
Ekilasini Nkosi, indlela yokwenza yezandla origami penguin
Indlela yokufundisa ngokushesha ingane ukuba ifunde?
Ukuchofoza mask ku "Photoshop" (Ukuchofoza Mask ku-Photoshop). "Photoshop" yamaDummies
Kulungile kanjani ukususa izinkampani ngendlela?